जानी राख्नुस् : गर्मीमा पानी कसरी र कति पिउने ? - Sudur Khabar
जानी राख्नुस् : गर्मीमा पानी कसरी र कति पिउने ?
प्रकाशित मिति : ३ बैशाख २०७५, सोमबार ०९:०६
शरीरमा पानीको कमीले एलर्जीको समस्या हुन सक्छ । एलर्जीले शरीरलाई भयानक असर पुर्याउन सक्छ । दैनिक कम्तीमा ८ गिलास पानी पिउनुस् । बैशाख महिना सुरु भइसकेको छ । काठमाडौंमा पनि हामीले गर्मीको महसुश गर्न थालिसकेको अवस्थामा तराईका जिल्लाहरुमा झन् गर्मी बढ्दो छ ।
गर्मीको समयमा पानीको कमीका कारण एलर्जीको समस्या धेरैमा हुने गर्छ । पानी शरीरको लागि अत्यावश्यक तत्व हो जुन हाम्रो शरीरमा ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको हुन्छ । शरीरमा पानी कम भएकाम विशाक्त पदार्थ सहज रुपमा बाहिर निक्लन पाउँदैनन् र समस्याहरु निम्तन सक्छन् ।
शरीरमा पानीको कमीले शरीमा फ्याटको मात्रा बढ्न पुग्छ भने पाचन प्रक्रिया कमजोर हुन्छ । जसले अंगहरुले ठीक रुपमा काम गर्न सक्दैनन् । शरीरमा विकार पदार्थ बढ्न थाली जोर्नी र मांसपेशी दुख्ने समस्या निम्तन सक्छ । पानी शरीरमा कम भएकै कारण कतिपयमा ज्वरो, उल्टी, रगतमा इन्फेक्सन, पथ्थरीलगायतका समस्या समेत देखिन सक्छन् । पानीको जरुरत हरेक मानिसको शरीरलाई आवश्यक पर्छ र यो सम्झनु पर्छ कि तिर्खा लागेपनि नलागेपनि सेवन नियमित र आवश्यकता अनुसार गरिरहनुपर्छ ।
दैनिक तिर्खा लागेपनि नलागेपनि ८ गिलास पानी पिउँदा एलर्जीको समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । कोहि मानिस पानीको साटो बीयर, कफी, सोडा जस्ता पेयपदार्थको पनि सहारा लिन्छन् तर यो तरल पदार्थ भएपनि स्वाथ्यको दृष्टिकोणले लाभदायक हुँदैनन् । पानी खाना खानु आधा घण्टा पहिले र खाना खाएपछि आधा घण्टा पनि पिउँदा लाभदायक हुन्छ ।
बाहिरबाट घर पुग्नेबित्तिकै भन्दा पनि केहि आराम गरेर सामान्य पानी पिउनुपर्छ । यदी तपाईँमा मुटु र कब्जियतको समस्या छ भने एक चम्चा कागजीको रस मिलाएर पिउँदा स्वस्थ्यकर हुन्छ खाना खानेक्रममा सकेसम्म पानी पिउने नगर्नुस् । खानाको समयमा पानी पिएमा पचाउन मुस्किल हुन्छ ।
यस्तै बिहान उठ्नेबित्तिकै पानी पिउँदा निकै फाइदा हुन्छ । तपाईँलाई यो पनि जानकारी दिऔं कि पानीको पर्याप्त सेवनले आन्दा, ब्लड, स्तनजस्ता क्यान्सरका बिरामीलाई केहि राहत मिल्छ ।